Linux Mint 19 Tara yave kuwanikwa neCinnamon, Mate uye XFCE | Kubva kuLinux
Linux Mint 19 Tara yave kuwanikwa neCinnamon, Mate uye XFCE
Vagadziri veLinux Mint vazivisa nhasi kuti iyo nyowani vhezheni yesystem yavo iri pano. Linux Mint 19 Tara inowanikwa mune matatu akasiyana "flavour", Cinnamon, MATE, uye XFCE.
Kubva paUbuntu 18.04 LTS Bionic Beaver, Linux Mint 19 Tara inosvika kuruzhinji nerutsigiro rwema 32-bit uye 64-bit mapurani, inouya nenzvimbo nhatu dzakasiyana, Cinnamon 3.8, MATE 1.20 uye XFCE 4.12 uye ichatsigirwa kwemakore mashanu anotevera. , kusvika Kubvumbi wa2023.
"Linux Mint 19 ndeye LTS (Yakareba Nguva Tsigiro) kuburitswa iyo ichave neyakagadziriswa kusvika muna 2023. Iyo inouya neyakagadziridzwa software uye inounza kuwanda kwakawanda uye maficha manyowani kuita kuti desktop yako ive yakatosununguka kushandisa kupfuura mamwe maBhaibheri. Iyi itsva vhezheni yeLinux Mint ine nhamba hombe yekuvandudza". Taura Clement Lefebvre mune chiziviso chepamutemo.
Hezvino izvo zvitsva muLinux Mint 19
Pakati peakakosha mapoinzi eLinux Mint 19 isu tinogona kutaura iyo kuisirwa chishandiso chitsva chekugadzira backups, zita rayo ndiTimeshift uye inotsigira kuumba madivhidhi USB mune exFAT fomati, kunatsiridzwa rutsigiro rwevazhinji monitors uye HiDPI, yakagadziridzwa software maneja, yekuvandudza maneja, uye nyowani default theme uye ma icon.
Linux Mint 19 inouyawo ne yose-nyowani yekugamuchira skrini iyo ichabatsira vashandisi vatsva kumisikidza iyo kuiswa nyore nyore, GNOME Kendari ikozvino ndiyo yakasarudzika kalendari application, iyo ichangoburwa Firefox 61 iripowo, GNOME Matanda ndiyo default log muoni, uye tsigiro yeMicrosoft fonts inowedzerwa.
Kune rumwe rutivi, Iyo ntpdate uye ntp mapakeji abviswa, pamwe neiyo Pidgin mameseji application. Akawanda mapikicha matsva akawedzerwa muLinux Mint uye inoshandisa Linux Kernel 4.15.
Linux Mint 19 Tara inouya isati yaiswa paMintBox Mini 2 uye MintBox Mini 2 Pro izvo zviripo kutenga nhasi.
Kana iwe uchida kurodha pasi Linux Mint 19 Tara unogona kudhawunirodha chifananidzo pamwe nemifananidzo yakajeka uye dhizaini yezvaunofarira kubva ku peji yepamutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Kugoverwa » Linux Mint 19 Tara yave kuwanikwa neCinnamon, Mate uye XFCE
Linux Kernel 4.16 inosvika kumagumo ekutenderera kwayo, zvinokurudzirwa kugadzirisa
Teleport: Tumira mafaira kubva kune imwe komputa kuenda kune imwe pane yemuno network